အပျင်းပြေ Bitcoin နဲ့ဘောလုံးပွဲလောင်းချင်သူများအတွက် OneHash
1:12 PM earn.btc, earn.money5comments
ဘောလုံးဝါသနာအိုးတွေအတွက် online မှာ btc နဲ့လောင်းပြီးရင်ခုန်နိုင်မှာပါ ....
American Football တို့ဖြစ်ပါတယ် ...
Champiions League, Europa League, Premier League, Serie A,...etc အကုန်အစုံလောင်းနိုင်မှာပါ...
မိမိကြိုက်တဲ့အသင်းဘက်လောင်း နိုင်ရင်ဘယ်နှစ်ဆရမလဲပြထားပေးပါတယ် .... Draw မှာနေပြီးလောင်းလဲရပါတယ် ... သရေကျရင်နိုင်ပြီပေါ့..........
<< OneHash >>
BTC ရှာသူတိုင်းမဖြစ်မနေ SignUp လုပ်ထားသင့်တဲ့ HashOcean
4:19 PM earn.btc, earn.money 1 comment
<< SignUp Now >>
SignUp လုပ်တဲ့အခါ password မထည့်ပေးရပါဘူး ... SignUp လုပ်ပြီးရင် mail ထဲစာတစ်စောင်ပို့ပါလိမ့်မယ် ... your password ဆိုပြီး password ပေးပါလိမ့်မယ် ... အဲ့ဒီ password နဲ့ Login ၀င်ပြီး Security မှာ Password ပြန်ချိန်းပေးလိုက်ပါ .... အဆင်ပြေကြပါစေ
10:18 AM c, c.microsoft No comments
Get the latest Windows 10 version 1511 build 10586 ISO download [Feb 2016 update]. The ISO file contains Home and Professional edition for both 32bit and 64bit systems. Softlay gives the single-click direct link toWindows 10 Free Download. The untouched Windows 10 ISO downloaded with the Microsoft’s official Media Creation Tool (MCT). The Windows 10 version 1511 Feb update is also available on MSDN. It’s full version Windows 10 ISO Download. Safe & faster than torrent download
8:13 AM earn.btc, earn.money6comments
BitWealth ကတော့ Cloud Mining website ပါပဲ... UK အခြေစိုက်BitWealth ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် London မှာ Registered လုပ်ထားပါတယ် ...
Registered Certificate ကြည့်ချင်ရင် >> Certificate <<
YouTube Video ကြည့်ချင်ရင် >> YouTube <<
အရင်ဆုံး BitWealth မှာ SignUp လုပ်ပါမယ် >> Sign Up Now <<
Registration completed ဆိုရင် Login ၀င်ပါမယ်
Username & Password ထည့် Ok နှိပ်ရင်မိမိ Acc ကိုရောက်ပါပြီ ... အခု Deposit စတင်ပါတော့မယ် ... Deposit ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါ...
Deposit page ကိုရောက်ရင် Deposit တင်မယ့် Ammount ကိုရေးပေးပါ ... ၁၂ရက်ကြာရင် ဘယ်လောက်အမြတ်ရမလဲတွက်ပြပေးပါလိမ့်မယ် .... အဓိကအချက်ကတော့ Payment method ပါဘဲ new user တွေကတော့ Direct bitcoin payment ကိုပဲရွေးပြီး မိမိ wallet ကနေ Deposit လုပ်ရမှာပါ ... မိမိ acc balance ထဲမှာ 100000 ကျော်ရှိနေရင်တော့ Acc balance ကနေ Deposit တင်နိုင်မှာပါ.... Mobile ဖုန်းသုံးပြီး Deposit တင်တာကပါအဆင်ပြေစေပါတယ် ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ Blockchain တို့ Coinbase တို့စတဲ့ Wallet app ကိုတန်းရောက်ပြီး Send နှိပ်ပေးရုံပါဘဲ PC သုံးတဲ့သူတွေကတော့ Wallet ကိုသိပ်ပြီးမဖွင့်ထားတတ်ကြလို့ပါဘဲ... အဲဒါဆို Address ကို Copy ယူပြီး မိမိ wallet မှ Deposit တင်မယ့် ငွေအတိအကျလွှဲပေးရပါမယ် ....
Make Deposit ကိုနှိပ်ရင် Address ပေးပါပြီ .... ဖုန်းနဲ့ဆို address ပေါ် Click တာနဲ့ wallet ဆီတန်းရောက်ပါပြီ
Deposit တင်ပြီးပြီဆို မိမိ acc မှာdeposit ammount ပြဖို့ ၅မိနစ်ခန့်စောင့်ရပါတယ် mail ကိုလဲ Deposit လက်ခံရရှိကြောင်းပို့ပါလိမ့်မယ်.... Deposit list ကနေ မိမိ ဘယ်နေ့မှာ Deposit ဘယ်လောက်တင်လဲ သက်တမ်းဘယ်တော့ကုန်မလဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
Deposit တင်ပြီး ၂၄နာရီကျော်ပြီဆိုရင် 12% ပေးပါပြီ ဘယ်လောက်ပဲရရမိမိwallet ထဲwithdraw လုပ်နိုင်ပါတယ် ... ကျွန်တော် satoshi 6000 withdraw လုပ်ပြပါမယ် ... Withdraw funds ကိုနှိပ်ပါ ...
မိမိထုတ်မယ့် amount ကိုထည့်ပေးပြီး Withdraw funds ကိုနှိပ်ပေးပြီး Confirm လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ကဲမိမိ gmail ထဲ ဘယ်လောက်လွှဲပေးလိုက်လဲ mail လေးဝင်လာပါပြီ
referrals bonus ကတော့ မိမိ referrals deposit တင်တဲ့ amount ရဲ့ 5% ပေးပါတယ် ....
၁၂ရက်မှာ ၁ရက်ကို ၃မိနစ်အချိန်ပေး ၁လပြည့်တာနဲ့ အတိုး 150%++ ရမယ်
4:28 AM earn.btc, earn.money6comments
BitWealth - UK အခြေစိုက် Registerd လုပ်ထားတဲ့ campany ပါ ...
Cloud Mining ဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံး Deposit တင်ရပါတယ် ... Minimum Amount က satoshi 100,000 ဆိုတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတာပေါ့ Maximun ကတော့ ကြိုက်သလောက်တင်နိုင်ပါတယ် ....
BitWealth မှာရင်နှီးမြှုပ်နှံသင့်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ နေ့စဉ် Profit ပေးတာပါဘဲ ... Profit ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ ရင်းနှီးလိုက်တဲ့ ငွေ(Bitcoin) ပမာဏရဲ့ 12% ကိုနေ့စဉ်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချရင်းနှီးနိုင်တာပေါ့... ကိုယ်ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေရဲ့ 12% ကို 12ရက်ပေးတဲ့အတွက် ၁၂ရက်ပြည့်ရင် အတိုး၄၄%ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
MMM Global မှာလို reject ထိစရာမပူရဘူး ...
IP မတူလို့အကောင့်ပိတ်ခံရမှာလဲစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူး ....
mini-job အတွက်တန်းစီပြီးစောင့်နေစရာမလိုဘူး ...
Wallet ထဲငွေလွှဲရင် Confirm ဖြစ်အောင် SS ပြန်ပို့စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ...
အခု satoshi 1,000,000 Deposit စတင်ကြည့်ကြမယ် .... satoshi 1,000,000 ဆို daily profit က 12% ဆိုတော့ deposite တင်ပြီး 24hr ကြာတာနဲ့ 12% (120,000) ပေးပါပြီ... ရလာတဲ့ 120,000 ကို deposit ပြန်တင်ပါ ... total deposit က 1,120,000 ဖြစ်သွားပါတဲ့အတွက် နောက်နေ့ 134,400 ရပါမယ် ... 134,000 ကို deposit ထပ်တင်ပါ ... ထပ်ရထပ်တင်ရင် ပိုပိုပြီး များလာမှာပါ ... အောက်မှာတော့ 12ရက်ဘဲ deposit တင်ပေးပြီးနောက်12ရက်ဘာမှမလုပ်ဘဲပိုက်ဆံထိုင်ထုတ်နေတာကိုတွက်ပြထားတာပါ .... ၁လလုံးနေ့တိုင်း deposit တင်လေ btc ပိုရလေပါပဲ...
ကျွန်တော်တို့ရုံးတွေ Sat & Sunday ပိတ်သလို Bitwealth လဲ စနေတနင်္ဂနွေပိတ်တဲ့အတွက် အဲ့နေ့တွေမှာတော့ profit 12% မပေးပါဘူး Deposit တင်ကတည်းက ပိတ်ရက်ပါထည့်ပေါင်းပေးပြီး Expried ကို 17ရက်ပေးထားပါတယ်.....
Total Deposit Daily Profit Balance
1120000 134400 400
1254000 150480 880
1404000 168480 1360
1572000 188640 2000
1760000 211200 2200
1971000 236520 2720
2207000 264840 3560
2471000 296520 4080
2767000 332040 4120
3099000 371880 5000
3470000 416400 421400
2470000 296400 717800
2350000 282000 999800
2216000 265920 1265720
2066000 247920 1513640
1898000 227760 1741400
1710000 205200 1946600
1499000 179880 2126480
1263000 151560 2278040
999000 119880 2397920
703000 84360 2482280
371000 44520 2526800
Total Earn 2526800
$10 Deposit တင်ပြီး ၁၀ရက်ကြာရင် $ 20 ရမယ့် Prefex မှာ ရင်းနှီးချင်ရင် Sign Up Now
Mutual Relations (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး 18++++
10:49 AM v, v.adult, v.drama No comments
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသမီး သုံးယောက်ရဲ့ အကြောင်းကိုအရင်စပြောရမှာပေ့ါ
ပတ်ဆိုးမီကတော့ စမန်ထတဲ့ ကောင်မလေး
ဟန်ရီချွန်းကတော့ ရိုးတဲ့အတဲ့ ကောင်မလေး
အဓိက မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ ဂျီအန်ကတော့ ပန်းချီဝါသနာကိုသာစိတ်ရှိတဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကောင်မလေးပေ့ါ
ပတ်ဆိုးမီ ..ဂျီအန် နဲ့ဟန်ရီချွန်းတို့ ပန်းချီသင်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးသုံးယောက်ဖြစ်တယ်
ပန်းချီသင်တန်းမှာပဲ အပိုဝင်ငွေအတွက် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်မော်ဒယ်လာလုပ်တဲ့
မင်းသား ဂျန်ဘေဟွန်နဲ့ တွေ့ဆုံကြတော့တာပဲ...
ထို သုံးယောက်ထဲမှာမှ ဂျန်ဘေဟွန်ဟာ ဂျီအန်ကို တွေ့တွေ့ချင်း ကြွေသွားပါလေတော့တယ်
သစ္စာဖောက်သွားတဲ့ရည်စားနဲ့ မင်းသမီး ဂျီအန်တို့ စကားများနေတဲ့အချိန်မှာပဲ
ဂျန်ဘေယွန်က ဟီးရိုးကြီးဝင်လုပ်ရာမှ အထိုးခံလိုက်ရတာနဲ့ သနားသွားပြီ ဂျီအန်တို့အဖွဲနဲ့
ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး နောက်ပိုင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအုံးလို့
18+ ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ဖောဖောသီသီ တင်ဆက်ထားတာကြောင့် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသူများမကြည့်ရှုရန်လည်း
Running Time : 1hr 24 minute
11:30 AM c, c.editing No comments
11:27 AM c, c.editing, c.utilities No comments
မြန်အောင်က မူလတန်းပြ ဆရာမလေးကိစ္စ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မြန်အောင်မြို့မှာ အခုတလော အတွဲတစ်တွဲရဲ့ Viber နှင့် အပြန်အလှန် ပြောထားတဲ့စာတွေနှင့် ဓာတ်ပုံတွေ လူထုအတွင်း...
Frozen Keyboard Pro 1.0.9 Latest Version ထွက်ရှိလာပါပြီ၊ Google Play (SGD2.54) Free Download
Frozen Keyboard Pro 1.0.9 Frozen Keyboard ချစ်သူများအတွက် Frozen Keyboard Pro 1.0.9 Latest Version ထွက်ရှိလာပါပြီ။ 8.3.2014 နေ့ထွက်ပါ၊ ...
Huawei Official Firmwares (Page 1)
PAGE 1 Download Huawei Official Firmwares , Huawei USB Driver And HiSuite Huawei All-In-One USB Driver (24MB) – Download ...
Basic Instinct (1992) မြန်မာစာတန်းထိုး (18+)
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ အတော်များများ သိဖူးပြီးသား နေမှာပါ။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကြီးမင်းသမီး ရှာရွန်စတုန်းရဲ့ အဟော့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇ...
သီချင်းစာအုပ်များ big bag - နာမည်ကြီး big bag - ပန့်အကြောင်းမပြောနဲ့ big bag - အိပ်ရာဝင်သီချင်းများ LMN Nကိုင်ရာ - သိမ်းထားခွင့် Th...